Amakhasino we-Desert Nights | R100 ibhonasi engadingi diphozi ⭐
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-desert nights casino
Isibuyekezo se-Desert Nights Casino
Ibhonasi Lokukwamukela:250% Ibhonasi Lokukwamukela
R100 Ayikho Idiphozithi
I-Desert Nights Casino ibilokhu isebenza kusukela ngo-2010. Isixhumi sayo esibonakalayo se-oasis-themed silula kodwa siyinkimbinkimbi futhi kulula ukuzulazula. Uzothola uhla oluphelele lwemidlalo yekhasino eku-inthanethi eDesert Nights Casino, kusuka emidlalweni yetafula kuya kubhingo kuya kuvidiyo ye-poker. Inezinhlu eziningi ezihehayo ezingaphezulu kwezingu-130 ezihlukile futhi ezisezingeni eliphezulu zeRival Gaming slots, ezisebenzisa ubuchwepheshe besoftware obuthuthuke kakhulu. Kusukela kumshini wezithelo ojwayelekile wesithathu kuya kwi-Rots Gaming ehlakaniphile yezindaba i-Slots, kukhona okuthile wonke umuntu angakuthanda, ngemidlalo emisha engezwa njalo. Abafikayo bangasebenzisa ngokunenzuzo ibhonasi yokwamukela yekhasino, futhi abajwayelekile nabo bavuna imivuzo ngamabhonasi aqhubekayo nokukhushulwa. Ungathatha ukunikezwa kwebhonasi yamahhala engafakwa futhi uzame yonke imidlalo mahhala. Ungalanda futhi ufake isoftware, noma udlale enguqulweni yokudlala esheshayo.
2021 Amakhodi Ebhoansi Yokwmakela e-Desert Nights Casino
Ibhonasi Engadiphozithi R100 mahhala
Ibhonasi yediphozi yokuqala 100 % Ibhonasi yomdlalo efinyelela ku-R10,000
Ibhonasi yediphozi yesibili 100 % Ibhonasi yomdlalo efinyelela ku-R15,000 + R500 mahhala
Amakhodi Ebhonasi Engena Diphozithi e-Dessert Night Casino
Awekho amakhodi adingekayo webhonasi engenayo idiphozi e-Desert Nights Casino. Kulula ukuthola ibhonasi engekho. Konke okudingeka ukwenze ukuqinisekisa ukuthi une-akhawunti futhi ungene ngemvume kuyo. Uma usukwenzile lokhu, kumane nje kuyindaba yokungena ekhasini lezinyuso bese ufaka isicelo sebhonasi ka-R100 engekho. Kunezidingo zokubheja zezikhathi ezingu-60 zalokhu, ngakho-ke qiniseka ukuthi ungakwenza ngaphambi kokufuna ibhonasi.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Desert Nights Casino
I-Desert Nights Casino inikeza abadlali abajwayelekile nsuku zonke, amabhonasi amasonto onke kanye nanyanga zonke aboshelwe kunoma yimaphi amadiphozi emali enziwe ngemuva kokufuna iphakethe lokwamukela – bheka ngezansi ukuze uthole ukubuka okufushane kwalokho okunikezwayo njengamanje:
Ibhonasi Yangempelasonto Kukhona ibhonasi efanisiwe engu-100% etholakala ngezimpelasonto. Lokhu kunikeza ne-chip yamahhala ebiza u-R500. Abadlali bangafuna kuze kufike ku-R5,000 ukuthola ibhonasi, futhi kunezidingo zokubheja zezikhathi ezingu-28 ezisendaweni.
177% ibhonasi yokulayisha kabusha yanyanga zonke Njalo ngenyanga eyodwa, abadlali bangathola ibhonasi engu-177% ehambisanayo efinyelela ku-R8,850 njengebhonasi yokulayisha kabusha. Inezidingo zokubheja zezikhathi ezingu-36 endaweni.
I-250% Midweek Top-Up (Ukunikezwa kwe-'Hump Day ') Njalo ngoLwesithathu, ungafaka i-akhawunti yakho ngebhonasi engu-250% ehambisanayo. Odinga ukukwenza ukufaka idiphozi okungenani engu-R400 futhi konke kungokwakho.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi e-Desert Nights Casino
Ukubhalisa ne-Desert Nights Casino kuqondile.
Chofoza inkinobho ewolintshi ethi ‘Dlala Manje’ ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi eliyisiqalo. Kuzoba nezinketho ezimbili. Ukuze udlale imidlalo ngaphandle kokubheja ngemali, zulazulela ku-‘Dlala ngokuzijabulisa ‘. Ukubhalisela ukugembula kwangempela, chofoza ku-‘Dlala Okwangempela ‘.
Uma usunalo igama lomsebenzisi nephasiwedi, uyakwazi ukusebenzisa lokho ukungena ngemvume. Uma kungenjalo, chofoza inkinobho ethi ‘Bhalisa’.
Nikeza ikheli lakho le-imeyili, igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-akhawunti yakho yekhasino. Chofoza umcibisholo oluhlaza okhomba ngakwesokudla ezansi ukuze uqhubeke. Faka igama lakho, usuku lokuzalwa nenombolo yeselula emikhakheni edingekayo. Chofoza futhi kumcibisholo oluhlaza okhomba ngakwesokudla sokuqhubeka. Nikeza ikheli lakho eliphelele, izwe nemali oyikhethayo. Setha umbuzo oyimfihlo nempendulo yokuphepha okuqhubekayo.
Ukuqedela inqubo yokubhalisa, chofoza kumcibisholo ohlaza olungile. Ikhasino izokufaka ngokuzenzakalela ku-akhawunti yakho entsha.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala e-Desert Nights Casino
Kukhona ukukhetha okuhle kwemidlalo ehlukene yekhasino etholakala eDesert Nights Casino. Ngezikhala zamavidiyo nemidlalo yetafula enikezwe yiRival Gaming, uyazi ukuthi ikhwalithi izobe iphakeme lapha.
Kunezihloko ezingaphezu kwezingu-150 ongakhetha kuzo e-Desert Nights Casino, kufaka phakathi izindawo ezingama- three reel zakudala five-reel video slots. Izihloko ezihamba phambili manje zifaka i-Wrath of Medusa, i-Thunderbird, i-Mystic Wolf ne-Age of Spartans.
Futhi okunikezwayo e-Desert Nights Casino kungukukhetha kwama-Slots aphayonwa yi-Rival Gaming. Ngaphandle kwamabhodwe abo aqhubekayo, ama-Slots aziwa ngesici sawo sokuxoxa izindaba. Njengamanje izihloko ezihamba phambili zifaka i-Spy Game, i-Panda Party, i-Cosmic Quest Ep 1 ne-2.
I-Desert Nights Casino inokukhetha okuncane kwemidlalo yetafula ekunikezelweni. Lokhu kufaka phakathi i-Blackjack, i-Baccarat, i-American Roulette, i-Pai Gow Poker, i-Red Dog, i-Craps, i-3 Card Blackjack ne-European Roulette.
I-Dertert Nights ibuye inikeze ama-jackpots, i-video poker nemidlalo ekhethekile enezihloko ezihamba phambili ezinjengeMajor Moolah, Joker Poker, Keno ne Bingo 80 Ball.
I-Desert Nights Mobile Casino: Ngabe i-Desert Nights Casino iqhathanisa kanjani neselula?
Abadlali be-Apple ne-Android bangajabulela i-Desert Nights Casino lapho kuthintwa khona lapho besendleleni. Akukho ukulanda okudingekayo, futhi yize ukukhethwa okugcwele kwemidlalo kunganikezwanga, kunemidlalo engaphezu kwengu-40 ongakhetha kuyo. Isici esihle kunguqulo yedeskithophu ukuthi yonke imidlalo ehambelana neselula inophawu lwe-smartphone ekhoneni elingezansi kwesokudla.
Ngingayidawiniloda i-Desert Nights Casino efonini yami?
Uhlobo lokulanda luyatholakala nge-PC, kepha njengoba kuyisayithi elungiselelwe ngokuphelele iselula, asikho isidingo sokulanda isoftware noma uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho ye-Apple noma ye-Android. Vele ungene ngemvume ngesiphequluli sakho bese udlala khona manjalo. Inqobo nje uma unesiphequluli sesimanjemanje njengeChannel noma iSafari, uthola ukufinyelela kumageyimu nakwamanye amasevisi.
Izindlela Zokuhoxa Ezamukelwa e-Desert Nights Casino
Neteller Yebo Amahora angu-48-72
ecoPayz Yebo Amahora angu-48-72
Bank Wire Transfer Yebo Izinsuku zebhizinisi eziyi-5-7
Izindlela Zoku Diphozitha Eazmukelwe e-Desert Night Caisno
Secure Instant Deposit Yebo
Kusungulwe: 2010 Inombolo yamahhala ye-SA: Ayikho
Opharethwa ngu: DeckMedia N.V. I-imeyili: [email protected]
Ilayisensi: Uhulumeni waseNetherlands Antilles / Curaçao Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Abaphumelele ku Casino kanye Nemiklomelo e-Desert Nights Casino
Abaphumelele kwakamuva e-Desert Nights Casino bafaka:
U-Eduard G uzuze u-R31,414 eCash Vegas
U-Aleksej F uzuze u-R10,552 kwaHot Hand Unified
URainey R uzuze u-R4,505 eHot Hand Unified
UPatricia R uwine u-R19,980 kwiBig Cash Win Unified
Izinzuzo nezingozi ze-Desert Nights Casino
- Imidlalo yokudlala yamahhala nemali yangempela - Izidingo zokubheja ezinamathiselwe kubhonasi engenayo idiphozi nemiklomelo eyamukelekile
- Ibhonasi Engena Diphozithi -Asikho ispiliyoni se khasino ebukhoma
- Iphakethe lokwamukela - Ukukhethwa okulinganiselwe okuncane kwemidlalo yokudlala ephathekayo
- Ukwesekwa kwamakhasimende kuyatholakala 24/7
- Rival futhi Saucify isoftware
- Landa noma izinguqulo zokudlala ezisheshayo
Ingabe i-Desert Nights Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
I-Desert Nights Casino iphethe ilayisense yokudlala kuHulumeni waseNetherlands Antilles, esebenza ngaphansi kwayo ngokulandela imithetho yokuziphatha.
Ngiyikhipha kanjani imali e-Desert Nights Casino?
Vele uchofoze kuthebhu ethi ‘Cashier’ kuwebhusayithi yekhasino. Khetha u-‘Khipha ‘. Lapha, uzobona indlela yokuhoxa oyitholayo, kanye neminye imiyalelo.
Kwezinye izikhathi, kungaba khona ukubambezeleka okuncane ekuqhubekeni kokudluliswa kwentambo kwamazwe omhlaba. Lokhu kungabangelwa yizinto ezibandakanya imisebenzi yokucubungula inkokhelo noma amaholide omphakathi.
Iyini i-Desert Nights Casino?
I-Desert Nights Casino iyikhasino eku-inthanethi enikeza ithuba lokudlala mahhala noma ngemali yangempela. Kukhona inketho yokulanda isoftware kwi-PC yakho noma ukufinyelela ukudlala okusheshayo kusuka kudivayisi yakho yeselula.
Ngubani ophethe i-Desert Nights Casino?
I-Desert Nights Casino iphethwe futhi i opharehwa yi-Deckmedia N.V.
Ingabe i-Desert Nights Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
I-Desert Nights Casino okwamanje ayinikeli ngezici zokubheja kwezemidlalo.
Ingabe i-Desert Nights Casino inikela ngohlelo lwe-VIP?
I-Desert Nights Casino inohlelo olunezigaba ezine lwe-VIP. Iqala ku-Explorer, bese idlulela eBronze, bese kuba iSilver, nasezingeni leGolide Ekugcineni. Konke okudingekayo ukuze ube yi-Desert Nights Explorer ukwenza inani eliphelele lama-real-deposit deposits noma ngaphezulu. Ngalokhu, uzonikezwa izinzuzo ezifana nokumangala okuyingqayizivele kosuku lokuzalwa, ukukhushulwa kwe-VIP kuphela, nokudlalwa kwamahhala okukhethekile ekukhishweni komdlalo okusha kakhulu. OkweBronze, iSiliva neGolide, ungalindela izinzuzo ze-Explorer kanye namaphoyinti amaningi we-comp lapho ubheja, uhlelo lokubuyisa imali masonto onke, ukukhipha imali ngokushesha nokukhokha, kanye nensizakalo eyenziwe ngezifiso ye-VIP nomphathi we-VIP ozinikele onayo.
Yiziphi izidingo zokubheja e-Desert Nights Casino?
Kunesidingo sokubheja esingu-60x kubhonasi engakhokhi engu-R500, kanti umkhawulo wokukhishwa kwemali omkhulu ngu-R1,800, kanye no-28x weBhonasi Yokwamukela kanye no-40x Womklomelo Wokwemukelwa wamahhala. I-Weekend Bonus iphethe imfuneko yokubheja engama-28x, i-Monthly Reload Bonus iphethe imfuneko yokubheja engama-36x, kanti iMidweek Top-Up inesidingo sokubheja esingu-45x.